Fahasamihafana eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / bakteriolojia / fahasamihafana eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny treponema borrelia sy leptospira dia ny Treponema izay miteraka sipilis ary ny Borrelia no miteraka aretina Lyme sy ny tazo mivaingana, fa ny Leptospira kosa dia miteraka leptospirosis.
Spirochetes dia bakteria motile miendrika spiral lehibe. Izy ireo dia an'ny baiko Spirochaetales. Misy fianakaviana roa amin'ity baiko ity i Spirochaetaceae sy Leptospiraceae. Borrelia sy Treponema dia razambe roa an'ny fianakaviana spirochaetaceae. Genus Leptospira dia an'ny leptospiraceae ao amin'ny fianakaviana. Ireo genera telo rehetra, Treponema , Borrelia ary Leptospira, dia pathogenika amin'ny olombelona.
2. Inona no atao hoe Treponema
3. Inona no atao hoe Borrelia
4. Inona no atao hoe Leptospira
5. Ny fitoviana eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira
6. Fampitahana mifanila - Treponema vs Borrelia vs Leptospira amin'ny endrika Tabular
Inona ny Treponema?
Treponema dia karazana spirochaetes. Boribory somary lavalava izy ireo izay matetika miparitaka. Ireo bakteria ireo dia mihetsika be ary mihodina manodidina ny endoflagella. Ny karazana Treponema sasany dia otrikaretina olombelona, ​​fa misy koa karazana Treponema tsy-pathogenika.
Sary 01: Treponema
Ny treponemes tsy-pathogenika dia mety ho ampahany amin'ny flora mahazatra amin'ny tsinay, ny lavaka am-bava, na ny lalan-jaza. Ny karazana pathogenika Treponema pallidum dia miteraka sipilisia na aretim-piterahana manerantany. Amin'ny alàlan'ny firaisana ara-nofo fotsiny no atao ny fampitana. Ny bejel (syphilis endemita) sy ny yaws dia treponematose roa hafa.
Inona no atao hoe Borrelia?
Borrelia dia karazana spirochaetes. Izy ireo dia lehibe kokoa noho ny spirochaetes hafa. Coil lehibe tsy ara-dalàna izy ireo. Ankoatr'izay, bakteria mihetsika izy ireo, gram-miiba izay mavesatra amin'ny vava sy taovam-pananahana. Manana flagella anatiny izy ireo.
Sary 02: Borrelia
B. recurrentis , B. vicentti , ary B. burgdoferi dia karazana Borrelia manan-danja ara-pahasalamana. B. miverimberina dia miteraka tazo mivaingana. B. vicentti dia miteraka angina an'i Vincent raha B. burgdoferi kosa dia miteraka aretina Lyme. Ny karazana Borrelia dia ampitaina amin'ny kaikitry ny tick na louse.
Inona ny Leptospira?
Leprospira dia karazam-biby izay an'ny leptospiraceae fianakaviana. Ireo bakteria ireo dia coil maratra izay mihetsika mavitrika. Manana flagella anatiny izy ireo. Izy ireo koa dia manana tendrony mihantona. Ny karazana Leptospira sasany dia otrik'aretina olombelona raha ny sasany kosa tsy mikorontana.
Sary 03: Leptospira
Ny karazana tsy pathogenika dia saprophytes. Leptospirosis dia aretina ateraky ny Leptospira . Leptospira dia miditra amin'ny mpampiantrano amin'ny alàlan'ny mucosa sy ny hoditra vaky. Ny aretin'olombelona dia mitranga amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny urine amin'ny biby voa. Na izany aza, tsy fahita firy ny fifindran'ny olombelona Leptospira .
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'i Treponema Borrelia sy Leptospira?
Leptospira, Treponema, ary Borrelia dia karazany telo amin'ny filaharana Spirochaetales.
Izy ireo dia zavamananaina mihetsika, tsy mitovy sela, miolakolaka.
Ankoatr'izay, bakteria miiba amin'ny gram izy ireo.
Izy rehetra dia samy manimba ny olombelona avokoa.
Manana flagella anatiny izy ireo.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira?
Treponema dia karazana spirochaetes izay miteraka sipilis raha Borrelia kosa dia karazana spirochaetes izay miteraka aretina Lyme sy tazo mamerina ary Leptospira dia karazana spirochaetes izay miteraka leptospirosis. Ka io no mampiavaka ny treponema borrelia sy leptospira. Treponema sy Borrelia dia an'ny fianakaviana spirochaetaceae ary i Leptospira dia an'ny leptospiraceae ao amin'ny fianakaviana. Ankoatr'izay, i Treponema sy i Borrelia dia tsy mifamatotra raha toa ka voafintina i Leptospira .
Ity sary eto ambany ity dia mampiseho antsipiriany misimisy kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny treponema borrelia sy leptospira.
Famintinana - Treponema Borrelia vs Leptospira
Trepenoma , Borrelia ary Leptospira dia karazana spirochaetes telo izay pathogenika amin'ny olombelona. Izy ireo dia bakteria motile miiba-gram. Bakteria miendrika spiral daholo izy rehetra. Ny Treponema dia miteraka sipilis, raha i Borrelia kosa dia miteraka aretin'ny lyme sy tazo mivaingana ary Leptospira kosa no miteraka leptospirosis. Treponema sy Borrelia dia an'ny fianakaviana spirochaetaceae ary i Leptospira dia an'ny leptospiraceae ao amin'ny fianakaviana. Ankoatr'izay, i Treponema sy i Borrelia dia tsy mifamatotra raha toa ka voafintina i Leptospira . Noho izany, ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny treponema borrelia sy leptospira.
1. Johnson, Russell. "Leptospira". Ncbi.Nlm.Nih.Gov, 2020, Azo jerena eto .
2. Radolf, Justin. "Treponema". Ncbi.Nlm.Nih.Gov, 2020, Azo jerena eto .
1. “Treponema pallidum 01” Nosoratan'i CDC - CDC (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. “Borrelia burgdorferi (CDC-PHIL -6631) lores” Nosoratan'ny CDC - avy amin'ny Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL) (Public Domain) via Commons Wikimedia
3. "Leptospira interrogans strain RGA 01" Noraisin'ny CDC Public Health Image Library.Ireo sary: ​​CDC / NCID / HIP / Janice Carr (PHIL # 1220). - (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Slime Layer sy Capsule Fahasamihafana eo amin'ny famerenana miverina sy tsy azo ovaina Fahasamihafana eo amin'ny F Plasmid sy ny R Plasmid Fahasamihafana eo amin'ny Bacillus sy Clostridium Fahasamihafana eo amin'ny Campylobacter sy Helicobacter
Fahasamihafana eo amin'ny Cartoon sy Comic
Fahasamihafana eo amin'ny Nokia N9 sy Nokia E7
Fahasamihafana eo amin'ny animisme sy ny animatisme
Fahasamihafana eo amin'ny mpandray ny proteinina mifandray amin'ny proteinina G sy ny mpandray ny enzyme
Fahasamihafana eo amin'ny Chondrichthyes sy Osteichthyes